CE OR ISO နှင့် FDA ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများနှင့် ORIENTMED ၅ လွှာအလွှာရှိသော KN95 မျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံး အရှေ့တိုင်း
CE ISO နှင့် FDA ပါသော ORIENTMED ၅ လွှာအလွှာရှိ KN95 မျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံး
အင်္ဂါရပ်များ - ၁။ အတွင်းပိုင်းမှအပြင်သို့အထိအလွှာ (၅) ခု - အားကောင်းသောစစ်ထုတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ KN95 မျက်နှာမျက်နှာဖုံးစစ်ထုတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သည်≥95%၊ Standard NIOSH စီးရီးထက် ၉၅% ပိုကောင်းသည်။ ၃။ ပုံစံနှစ်မျိုး - အဆို့ရှင်၊ အဆို့ရှင်မရှိ။
ထုတ်ကုန်အမည် KN95 ၅ ပြည်သူ့အကာအကွယ်မျက်နှာမျက်နှာဖုံး
ပစ္စည်း ၄၅% ယက်ခြင်း၊ အရည်ပျော်မှု ၃၅%၊ လေပူဝါ ၂၀%
အလွှာ ၅ လွှာ
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား 14 * 12 စင်တီမီတာ
အထုပ် 5pcs / bag, 20pcs / Box, 1000pcs = သေတ္တာ 50 / ပုံး
သေတ္တာဘူးအရွယ်အစား 1000PCS / Carton (ထုပ်ပိုးအဟောင်းအတွက် ၁၀၀pcs / Carton)၊အရွယ်အစား 63 * 28 * 48CM
Dimension အလေးချိန် 20KG / ပုံး
လက်မှတ်များ CE ISO
ကြာမြင့်ချိန် ပမာဏပေါ် မူတည်၍ နေ့စဉ်စွမ်းရည် ၁ သန်းမှ ၅ သန်းအထိရှိသည်
၁။ အလွှာငါးခု (အတွင်းမှအပြင်သို့) ။ အားကောင်းသောစစ်ထုတ်ခြင်းစွမ်းရည်ရှိသည်
၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ KN95 မျက်နှာဖုံးစစ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည် ≥95%, စံ NIOSH စီးရီးထက်သာ။ ကောင်း၏ ≥၉၅%
၃။ အမျိုးအစားနှစ်မျိုး - အဆို့ရှင်၊ အဆို့ရှင်မရှိ
4. အရည်ပျော်သောမှုတ်ထည်၏အရည်အသွေးသည်မျက်နှာဖုံး၏ filter ကိုထိရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်သည်။
၅။ သက်တမ်း - ၂ နှစ်
CE က ISO FDA ကလက်မှတ်များနှင့်အတူ 6.
5pcs / အတွင်းအိတ်; 10 အိတ် / box ကို
24 သေတ္တာများ / ပုံး
ပုံးအရွယ်အစား: 60 * 34 * 45cm
က။ အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းရှိပါက KN95 မျက်နှာဖုံးကို ၁ ရက်မှ ၁ ရက်အတွင်းပေးရမည်။
ခ။ ထုတ်လုပ်မှုအသစ်ဖြစ်ပါက ၁ ပတ်ကြာပါလိမ့်မည်။
Supply နိုင်ခြင်း: 5,000,000 pcs / နေ့။
ရှေ့သို့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတစ်ခါသုံးလူအုပ်စု ဦး ထုပ်
နောက်တစ်ခု: Oriental ORT168 CE ISO နှင့် FDA တို့ဖြင့်ခံတွင်းရေသွင်းကိရိယာ
အမျိုးအစား I အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစား ၂၊